Maraykanka oo kumanaan ciidamo dheeraad ah u diraya Bariga Aas... | Universal Somali TV
Maraykanka oo kumanaan ciidamo dheeraad ah u diraya Bariga Aasiya iyo xuduuda Shiinaha.
Wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ayaa qorsheyneysa inay kumanaan ka mid ah ciidamada badda Mareykanka iyo ciidamo kale oo militariga ah u diraan Bariga Aasiya si ay uga hor tagaan dalka Shiinaha, sida lagu sheegay warbixin cusub.
Sida laga soo xigtay qorshaha cusub, maamulka Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ansaxin doona in la geeyo ciidamada badda, iyo kuwa militiriga gobolka, waxaana warkan lagu daabacay jariirada Wall Street Journal horaantii toddobaadkan.
Warbixinta ayaa intaa raacisay in 2,200 oo ka kooban ciidamada badda iyo kuwa militiriga oo ay u dhamaystiranyihiin qalabkooda, diyaaradahooda, taangiyada iyo hub kale oo culus, loo diri doono wareegyo toddoba bilood ah.
Qaar ka mid ah ciidamada ayaa la sheegay in la geyn doono saldhigyada Bariga Dhexe, halkaas oo Maraykanku uu ka wado waxa uu ugu yeeray dagaal ka dhan ah argagixisada muddo sanado ah sida dalalka Iraq iyo Afghanistan.
Maraykanku ayaa waxaa sidoo kale ka jooga qiyaastii 50,000 oo askari oo ka shaqeeya Japan, ku dhawaad ​​30,000 Koonfurta Kuuriya, iyo 7,000 oo dheeraad ah dhulka Pacific ee Guam.
Pentagonka ayaa sidoo kale la rajeynayaa in ay kordhiso tirada ciidamada Badda ee jooga Darwin iyo Australia, halkaas oo ay ku suganyihiin 1,250 askari oo Maraykan ah oo la geeyo wareegyo lix bilood ah.
Sida laga soo xigtey warbixinta, ciidamada la geyn doona xarumaha kala duwan ayaa hoos imanaya Istaraatiijiyada Difaaca Qaranka ee Maraykanka oo horay ugu dhawaaqay maamulka Trump taas oo ay uga soo horjeedaan Saameynta sii kordhaysa ee Ruushka iyo Shiinaha ee gobolka.
Kan-xigaKaniisadda Katooliga ee Tansaaniya o...
Kan-horeMyanmar: Qaar ka mid ah ciidamada amm...
40,810,099 unique visits